2015-01-11 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
ကျွန်တော်အမေဟာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်နေသူ။ ကျွန်တော်ဟာ အမေကိုအရမ်းမုန်းတယ်။ အမေဟာ ကျွန်တော့်ကို တော်တော်လည်း စိတ်မချမ်းသားအောင်လုပ်တတ်တယ်။ အမေ့ကြောင်း ကျွန်တော်မျက်နှာခဲ့ရတာလည်း အများကြီးပဲ။ အမေကတော့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖုံလုံဖို့အတွက် ကျောင်းသူ/သားတွေ ဆရာ/မတွေအတွက် ထမင်းအငှားချက်တယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် မူလတန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကပေါ့။ တနေ့တော့အမေဟာ ကျောင်းကိုလာပြီး ကျွန်တော့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်က ကျွန်တော့်အတွက်
တော်တော်လေးကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့သလို ကျွန်တော့်ကိုလည်း အရှက်ရစေတဲ့နေ့ပေါ့။
အဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အမေလုပ်တာပါလိမ့်ဆိုတာ ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေ့ကို ငါဟာဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒေါသတွေထောင်းထောင်းထွက်နေတဲ့အကြည့်နဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်ပြီး အခန်းထဲကနေ ကျွန်တော်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် ကျောင်းကိုရောက်တော့ အတန်းဖော်တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ "ဟေး! နင့်အမေက မျက်လုံးတစ်ဖက်အကန်းပေါ့!"
အဲဒီစကားကိုကြားရတော့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီနေရာမှာပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေလိုက်ချင်တယ်။ အမေကိုလည်းပဲ ဒီလောကထဲမှာ ရှိမနေစေချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပြီးရင် အဲဒီနေ့က အမေနဲ့တွေ့ပြီး "သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ ငါ့ကိုပျက်ရယ်ပြုခံရအောင်ပဲ လုပ်ဖို့လောက်ကိုပဲ အမေသိတယ်။ ဘာလို့ခုထိမသေသေးတာလဲ" ဟုပြောဆိုပြီး ဆဲဆို ရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အမေကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောထေ့လိုက်ပြီး ဘာမှလည်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ရင်ထဲမှာဒေါသတွေပြည့်လို့ပေါ့။ အမေဘယ်လိုခံစားနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်း ငါဘာမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးပေါ့။
အဲဒီနေ့ကစပြီး အိမ်ကနေအပြီးထွက်သွားဖို့ပဲ ကျွန်တော်စိတ်ကူးတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်စာတွေများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ နိုင်ငံခြားမှာအိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေနဲ့ တင့်တင့်တယ်တယ်နေနိုင်ခဲ့တယ်။ ကလေးတွေလည်းရပြီး မိသားစုတွေနဲ့အရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုတစ်ခုကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လေ။ တနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့အမေက ဗုံမဆင့်ဆိုင်းမဆင့် အိမ်ကိုလာလည်တယ်။ အမေဟာ ကျွန်တော်ကိုမတွေ့တာ
နှစ်တွေလည်းတော်တော်ကြာသွားပြီ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်သားသမီးတွေနဲ့လည်း တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးမဆုံဖူးဘူးလေ။
ကျွန်တော့်အမေ တံခါးပေါက်ဝမှာရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်သားသမီးတွေက ဝိုင်းပြီးရယ်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်မဖိတ်ခေါ်ပဲလာတဲ့ အမေ့ကို
"ခင်ဗျား ကျွန်တော်အိမ်ကို ဘာလို့လာရတာလဲ။ ဘယ်ကလဲ။ ကလေးတွေကိုခြောက်လှန်နေတာလား။ သွား! ငါ့အိမ်က အခုထွက်သွား"။
ဒါပေမယ့် အမေက စိတ်မဆိုးပဲနဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့စွာနဲ့ "အို! စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။ အိမ်လိပ်စာမှားသွားလို့ပါ" ဟုပြောဆိုပြီး အိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့တော့ ကျောင်းသားဟောင်းများပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ကျွန်တော့်ဆီသို့ စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ကို 'စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားစရာရှိတယ်'ဆိုပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ ချစ်ဇနီးချောလေးကို ကျွန်တော် လိမ်ပြောပြီးသွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားဟောင်းများပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲပြီးတော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီကိုသွားပြီး အမေ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်စုံစမ်းမိတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော့်အမေသေသွားပြီးဆိုတာကို အိမ်နီးနားချင်းတွေပြောပြလို့ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ မျက်တစ်စက်မှမကျပါဘူး။ ထို့နောက်မှာတော့ အိမ်နီးနားချင်းတွေက "မင်းကိုလေ မင်းအမေက အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေစေချင်ခဲ့တာ" ဟုပြောဆိုကြပြီး၊ ကျွန်တော့်အတွက် အမေရေးထားခဲ့တဲ့ စာတစ်စောင်ကို ကျွန်တော်လက်ထဲသို့ထည့်ပေးကြတယ်။
အမေ အရမ်းချစ်ရတဲ့ သားလေး
အမေလေ သားလေးအကြောင်းကိုတွေးပြီး အမြဲတမ်းလွမ်းဆွေးနေရတယ်။ နောက်ပြီး သားလေးအိမ်သို့ အမေလာခဲ့မိတာရယ်၊ သားလေးရဲ့ကလေးလေးတွေကို ခြောက်လှန့်သလိုဖြစ်သွားမိခဲ့တဲ့အတွက်ရယ်၊ အဲဒါတွေအတွက် အမေတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးသားလေးရယ်။
ကျောင်းသားဟောင်းများပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲသို့ သားလေးလာမယ်ဆိုတာကိုသိရလို့ အမေအရမ်းဝမ်းသားခဲ့ရတယ်သိလား။ ဒါပေမယ့်သားလေးရယ်၊ အမေကတော့ သားလေးကိုလာတွေ့ချင်သော်လည်း အိပ်ရာပေါ်ကနေထနိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သားလေးငယ်ငယ်တုန်းက အမေဟာ သားလေးအတွက် အမြဲတမ်း စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကို အမေ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး သားလေးရယ်။
သားလေးတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲလေ။ သားလေး ကလေးလေးဘဝတုန်းကပေါ့။ သားလေးမတော်တဆချော်လဲပြီး မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရတယ်လေ။ ကိုယ့်သားလေးတစ်ယောက် မျက်လုံးတစ်ဖက်ကွယ်ပြီး အင်္ဂါမစုံမလင်နဲ့ ကြီးပြင်းလာမှာကို အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်နိုင်ပါ့မလဲလေ။ ဒါဟာ မိဘတိုင်းရဲ့မေတ္တာစေတနာပဲလေ။ အဲဒီတော့ အမေဟာ သားအတွက် မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုထုတ်ပေးပြီး အစားထိုးကုသပေးခဲ့တယ်လေ။
တကယ်တော့ အမေဟာလေ သားလေးအတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူသလို အရမ်းလည်းကြည်နူးရတယ်သိလား သားလေး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေမျက်လုံးနဲ့ သားလေးဟာ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကိုမြင်နေရလို့ပါပဲ။ ဒီလောကကြီးထဲမှာ သားလေးဘဝအဆင်ပြေနေရင် အမေပျော်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အမေအနားမှာ သားလေးကိုရှိနေစေချင်ခဲ့မိတာကတော့ အမှန်ပါပဲ သားလေးရယ်။ သားလေးဘဝ ထာဝရလှပနိုင်ပါစေ။
___My mom only had one eye ကိုဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပြီး ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ပါသည်။